မြန်မာ့အရေး အာဆီယံအစည်းအဝေး အထူးစောင့်ကြည့်နေကြ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်အောင် နည်းလမ်းရှာရေး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့မှာ မနက်ဖြန် ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ အစည်းဝေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းအပေါ် အရင်က မကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ အကဲစမ်းမှုတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်မှုတွေ ရှိနေရတယ်လို့ လေ့လာ သုံးသပ်သူတွေ ပြောဆိုပါတယ်။ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကျလာဖို့မှာ အဟန့်အတားတွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။ AP သတင်းဆောင်းပါးကို အခြေခံပြီး ဦးသိန်းထိုက်ဦး ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းဟာ ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်ရေးကို ထိခိုက်လာတဲ့ ပဋိပက္ခလို့ ကုလသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်တွေက သတိပေးနေတဲ့အချိန်မှာ မနက်ဖြန် အာဆီယံ ဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်တွေ ဂျကာတာမှာ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးဖို့ ပြင်ဆင်ကြတာပါ။
တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်အရေးကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာက အာဆီယံ အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံများ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ညီညွတ်မှုနဲ့ အများလက်ခံ ယုံကြည်မှုကို စမ်းသပ်တဲ့ အစည်းအဝေးတခုလည်း ဖြစ်နေတယ်လို့ ဒေသတွင်း အကဲခတ်တွေက ပြောဆိုနေပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ Chulalongkong တက္ကိသိုလ် လုံခြုံရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ပါမောက္ခ Thitinan Pongsudhirak, (သစ်တီနန် ပေါင်ဆပ်ဒ်ဟီရက်ခ်) က အခုလို ပြောပါတယ်။
13. SOUNDBITE (English) Professor Thitinan Pongsudhirak, (သစ်တီနန် ပေါင်ဆပ်ဒ်ဟီရက်ခ်) Director of Institute of Security and International Studies:
အာဆီယံရဲ့ ရပ်တည်မှု အခန်းကဏ္ဍ အဓိက နေရာကို အထူးအရေးအကြီး အာရုံစိုက်ခံရတဲ့အချိန်ပါ။ အာဆီယံရဲ့ ရည်မှန်းချက် အယူအဆက ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးအတွက် မဟာဗျုဟာကျတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပေါ်လာအောင် ဖေါ်ဆောင်ပေးတဲ့ နေရာတခုဖြစ်ဖို့ပါ။ ၅၃ နှစ် အဖွဲ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကာလအတွင်းမှာ အဆိုးဝါးဆုံး၊ အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ စိုးရိမ်စရာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။
ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေအကြား တခုခုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံး သဘောတူလက်ခံမှဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် ရှိတာကြောင့် မြန်မာ့အရေးမှာ အားလုံးက သဘေတူဖို့ ဆိုတာ အာဆီယံအဖွဲ့အကြား သိပ်ကို ခက်ခဲမယ်လို့ ဒေသတွင်း အကဲခတ်တွေကမြင်ပါတယ်။
အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေဟာ တခြား ဒေသတွင်း နိုင်ငံတချို့မှာလည်း အလားသူ ပေါ်ပေါက်နေတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ကို ပြောင်းလဲအောင် ဖိအားပေးနိုင်ဖို့ အာဆီယံရဲ့ အင်အားကို အကဲခတ်တွေ သံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း လမ်းမပေါ်က ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်နေတာတွေ ချက်ခြင်းရပ်တန့်ဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေ အရေးပေါ် ပေးအပ်နိုင်ရေး အာဆီယံ ကိုယ်တိုင် ကမကထလုပ် ဝင်ရောက်ဖို့၊ နိုင်ငံရေးအရ အဖြေရှာနိုင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပေါ်လာအောင် အာဆီယံ ကြားဝင် နိုင်မလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အဆိုပြုချက်တွေကတော့ ရှိနေပါတယ်။
မဟာဗျုဟာနဲ့ နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေးဌာန သုတေသီတဦးဖြစ်တဲ့ Evan Laksmana က အခုလို ပြောပါတယ်။
Evan A. Laksmana, Researcher at Centre for Strategic and International Studies:
အာဆီယံ အတွက် အမြင့်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အဆင့်ပါ၊ ဒီ အစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံတခုရဲ့ အမြင်သဘောထားတွေ ဒါမှမဟုတ် စိုးရိမ်မှုတွေကိုပဲ အကျဉ်းချုံးဖေါ်ပြထားမျိုး သက်သက်ထက် တခုခု မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တခုခု ကျမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြား ညီညီညွတ်ညွတ်တဲ့ ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပေါ်လာမယ့်လို့ ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကလည်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ရင် မနက်ဖြန် အာဆီယံ အစည်းအဝေးဟာ မြန်မာစစ်တပ် အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အာဏာရယူထားတာကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့ပွဲတခုသာ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်း နိုင်ငရေး အတိုက်အခံတွေက ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ လွှတ်တာ်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG အဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဆာဆာက အခုလို ပြောပါတယ်။
10. SOUNDBITE (English) Dr. Sasa, Member of National Unity Government:
ဒီအစည်းအဝေးမှာ လူသတ်သမား အကြီးအကဲ မင်းအောင်လှိုင်ကို ဖိတ်ကြားတာကို လက်မခံဘူးလို့ ပြောဆိုသွားတာပါ။ အာဆီယံဟာ စစ်အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောဆိုနေပေမဲ့ NUG အရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးမှု မရှိတဲ့အပေါ် မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ဒါက စိတ်မကောင်းစရာလို့ သူက ထောက်ပြသွားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သွေးမြေကျမှုတွေ အဆုံးသတ်ပြီး အခြေအနေ ပိုမဆိုးအောင် အာဆီယံ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေ နည်းလမ်းရှာနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ကလေးငယ်တွေနဲ့ မိန်းခလေးတွေ အပါအဝင် လူ ၇၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီးပြီလို့ နိုင်ငံတကာက ထောက်ပြနေပါတယ်။
ဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံချိန်ဟာ တကယ်တမ်းကျ နောက်တောင်ကျနေပါပြီလို့ ဝေဖန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို နောက်ကျနေတဲ့ ကြားမှာ တခါလာလည်း မဲပြာပုဆိုး ဆိုသလို တနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို ကြားဝင်မစွက်ဖက်ရေးဆိုတဲ့ အခြေခံမှုနဲ့ပဲ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေကို ထပ်ပြီး မျက်ကွယ်ပြုသွားတာမျိုး မဖြစ်ဖို့ သတိပေးသံတွေလည်း ကြားနေရပါတယ်။ ကျနော်သိန်းထိုက်ဦးပါ။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး/ VOA Burmese